Home > Soomaali > Dugsi Hoose & Dhexe > Kindergarten
Si aad ugu qalanto kindergarten, ilmuhu waa inay shan jirsadaan ka hor Sabtember 1. Hadii cunugaagu shan jirsanayo Sabtember 1da ama ka hor, ayna kula tahay in cunugaagu diyaar u yahay inuu dugsiga bilaabo, waa kuwaan tallaabooyinka aad raacayso:
1. Soo buuxi soona dhammaystir kaarka codsiga ama dalbashada, kuna soona dir xilliga kama dambaysta doorashada oo ah Febaraayo 8da, 2011.
2. Haddii Luqadda Ingiriisidu aysan ahayn luqadda koowaad ee gurigiinna loogaga hadlo, ama qoyskaagu yahay laboluqoodle, cunugaagu inuu ballan ka samaysto Xaruunta Dhexe ee Qoysaska Cusub. Ballankaasi cunugaagu wuxuu yeelan doonaa Qiimayn luqaddiisa Ingiriisida si loo arko haddii isagu/iyadu u qalmo/qalanto adeegyada Bartayaasha Luqadda Ingiriisida (ELL), kal-kaaliye caafimaadna waxay eegaysaa taariikh caafimaadka cunugaaga iyo tallaalladiisa. Waxaad u baahan tahay inaad keento xilliga ballantaada waxyaabaha soo socda:
Dokumentiga dhalashada (warqadda dhalashada, I-94, green card, ama baasaboor)
Warbixin kooban ee baaritaanka dhallaanka aminka hore Early Childhood Screening Summary (Wac lambarkan 612.668.3711 si aad balan u qabsato.)
3. Diiwaan-galin dhammaystiran ayaa guga ku diyaar ahaan doonta dugsiga cunugaaga loo qorsheeyey. Haddii aad soo celiso kaarka codsiga dugsiga xilliga kama dambaysta ah ee loogu talagalay, waxaad heli doontaa warqad tilmaamaysa dugsiga lagu qoray bisha April, ayna weheliyaan tilmaamaha la xiriira diiwaangelinta.
Kindergardanka Maalinta oo Dhan ah (all-Day Kindergarten)
Dugsiyo badan ayaa bixiya kindergardanka Maalinta oo dhan ah. Qoysasku waa inay hubsadaan in dugsiga ay codsanayaan uu leeyahay nooca dugsi maalmeedka ay doonayaan. Hadii aad codsato dugsi bixiya wadajir ahaan kindergardanka maalinta oo dhan ah iyo kan maalinta barkeed ah, waa inaad ogaataa inaanan laguu damaanad-siinin boos ka mid ah kan maalinta oo dhan ah. Waxaad ka garan kartaa door bididaada subaxa, galabka ama kindergardanka maalinta oo dhan ah xilliga aad ballanta ku leedahay Xaruunta Qoysaska Cusub, laakiin go’aankaas waxaa samaynaya dugsiga cunugaaga lagu qoray.
Hore ugu oggolaanshaha (Early admission)
Ilmaha shan jirsada inta u dhaxaysa Sabtembar 2daa ila Oktoobar 31daa ayaa u qalma hore ugu oggolaanshaha kindergardanka iyadoo la eegayo sadex arimood: Hubinta Caafimaadka ilmaha amin hore (Early Childhood Screening), fasalka oo dhexdiisa ilmaha lagu eego iyo Bilaabida Qiimaynta Kindergardanka (Beginning Kindergarten Assessment – BKA). Sadexdaan waxyaabood oo la eegayo ayaa sheegaya haddii cunugu diyaar u yahay dugsiga. Ku meelaynta oggolaanshaha hore ayaa ku xiran siday suurtogal u tahay in meel loo helo, iyo meelaynta cunug shan jirsaday Sabtember 1daa ama ka hor ayaa mudnaanta ka leh ku meelaynta hore ugu oggolaansho.